यस्तो छ पछिल्लो अंकगणित नेपाल विश्वकप छनोटसम्म पुग्न के–के छन् बाधा ? — SuchanaKendra.Com
यस्तो छ पछिल्लो अंकगणित नेपाल विश्वकप छनोटसम्म पुग्न के–के छन् बाधा ?
सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७४/११/१ गते
काठमाडौं। आगामी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको छनोट खेलसम्म पुग्नको लागि अहिले नेपाल नामिबियामा भइरहेको ‘आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टु’ प्रतियोगितामा भिडिरहेको छ । प्रतियोगिताको अंक तालिकामा नेपाल अहिले दोस्रो स्थानमा छ । ६ टिम सहभागी यो प्रतियोगिताका शीर्ष २ टोली विश्वकप छनोट खेल्नका लागि योग्य हुनेछन् । सबैभन्दा पछि पर्ने २ टोली डिभिजन ३ मा घटुवा हुनेछन् र बीचका २ टोली डिभिजन २ मै कायम रहनेछन् ।
प्रतियोगिताको समूह चरणका ५ खेलमध्ये ४ खेल खेलिसक्दा नेपालले विश्वकप छनोटमा पुग्ने बलियो सम्भावना कायमै राखेको छ । पछिल्लो अंक तालिका अनुसार अबका बाँकी खेलमा जस्तोसुकै नतिजा आए पनि नेपाल डिभिजन ३ मा घटुवा भने हुने छैन । तर, विश्वकप छनोटसम्म पुग्नको लागि नेपालसामु अझै चुनौती छन् । ती चुनौतीलाई पार गर्न सकेमा मात्र नेपाल विश्वकप छनोटसम्म पुग्नेछ । यसका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो क्यानडासँग भोलि हुने समूह चरणको अन्तिम खेल ।
शीर्ष २ टोली विश्वकप छनोट खेल्नका लागि योग्य हुनेछन् । सबैभन्दा पछि पर्ने २ टोली डिभिजन ३ मा घटुवा हुनेछन् र बीचका २ टोली डिभिजन २ मै कायम रहनेछन् ।
समान ४ खेल खेलेका क्यानडा र नेपाल अंक तालिकाको क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् । यी दुवैको समान ६ अंक छ र नेट रनरेटका आधारमा क्यानडा शीर्ष स्थानमा छ । तेस्रो र चौथो स्थानमा समान ४ अंकसहित युएइ र नामिबिया छन् । यी ४ टोली शीर्ष २ मा पर्ने होडमा छन् र २ टोली ओमन र केन्या शीर्ष २ को दौडबाट बाहिरिइसकेका छन् ।
भोलि हुने नेपाल र क्यानडाबीचको खेलको विजेता सोझै विश्वकप छनोटसम्म पुग्नेछ । यदि नेपालले यो खेल जित्यो भने विश्वकप छनोटको यात्रा तय गर्नेछ । तर, यदि यो खेल हारेमा के होला ? यदि यस्तो भएमा नेपाल विश्वकप छनोटसम्म पुग्नको लागि अन्य खेलको नतिजाको भर पर्नुपर्नेछ । नेपालले भोलिको खेल हारेको अवस्थामा अन्य खेलको नतिजा पनि नेपाललाई फाइदा पुग्ने गरी आएमा मात्र नेपाल विश्वकप छनोटसम्म पुग्न सक्नेछ ।
भोलि हुने नेपाल र क्यानडाबीचको खेलको विजेता सोझै विश्वकप छनोटसम्म पुग्नेछ ।
आज नामिबिया र केन्याबीच हुने समूह चरणको खेल पनि नेपालको लागि निकै महत्वपूर्ण हुनेछ । यस खेलमा नामिबिया विजयी भए नामिबियाले पनि नेपाल र क्यानडासँग बराबर ६ अंक जोड्नेछ। तर, यो खेल केन्याले जितेमा केन्याको मात्रै २ अंक हुनेछ । तीन खेल खेलेको केन्याले अहिलेसम्म एउटा पनि खेल जितेको छैन र शून्य अंकसहित अंकतालिकाको अन्तिममा छ ।
त्यसपछि निर्णायक ३ खेल बुधबार हुनेछन् । बुधबार हुने समूह चरणका अन्तिम ३ खेलमा नेपाल र क्यानडा तथा नामिबिया र युएई भिड्नेछन् । यी दुई खेल नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् । भोलिको तेस्रो खेल केन्या र ओमानबीच हुनेछ र यो खेलको नतिजाले नेपाललाई असर पार्ने छैन । यदी नामिबियाले अबको दुबै खेल जित्ने र नेपाल पराजित हुने हो भने नेपाल शीर्ष दुईमा पर्न असफल हुनेछ।
अहिलेसम्मको अंकतालिकामा नामिबिया र युएइको नेट रनरेन धनात्मक (प्लस) छ र नेपालको नेट रनरेट ऋणात्मक (माइनस) छ । यस्तो अवस्थामा यदि नेट रनरेट निर्णायक भएमा नेपाल शीर्ष २ मा पर्न निकै कठिन छ ।
नेपाल पराजित हुने र नामिबियाले आज केन्यासँग हारेर भोलि युएईलाई जितेमा पनि नेपाल र नामिबियाको अंक बराबरी हुनेछ र रनरेटको आधारमा शीर्ष दुईमा पर्ने टिमको छिनोफानो हुनेछ। नामिबियाले दुबै खेल हार्ने र नेपाल पनि भोलि पराजित भए नेपाल र युएईको समान ६ अंक हुनेछ। यस्तो अवस्थामा पनि रनरेट निर्णायक हुनेछ।
नेपालको लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा हो यदि अंक समान भएर नेट रनरेटका आधारमा शीर्ष टोली छान्नुपर्ने भयो भने नेपाल शीर्ष २ मा पर्न कठिन हुनेछ । किनकि अहिलेसम्मको अंकतालिकामा नामिबिया र युएइको नेट रनरेन धनात्मक (प्लस) छ र नेपालको नेट रनरेट ऋणात्मक (माइनस) छ । यस्तो अवस्थामा यदि नेट रनरेट निर्णायक भएमा नेपाल शीर्ष २ मा पर्न निकै कठिन छ । अतः नेपाल विश्वकप छनोट खेल्नको लागि भोलि क्यानडासँग हुने खेल जित्नु अनिवार्यजस्तै देखिएको छ । डिसी नेपालबाट